USUKU LWEKOFU YEHLABATHI NGO-2019: IMBALI KUNYE NOKUBALULEKA- PAMPEREDPEOPLENY.COM - I-INSYNC
Usuku lweKofu lwaMazwe ngaMazwe ngo-2019: Imbali kunye nokuBaluleka
Itekhnoloji I-BSNL isusa iiNtlawulo zoFakelo kwiiNxibelelwano zeBroadband zeXesha elide
Ekhaya I-Insync Cinezela Pulse oi-Neha Ghosh Ngu UNeha Ghosh Nge-Okthobha 1, 2019
Iintsasa azigqitywanga ngaphandle kokusela ikomityi yekofu kwaye ivumba layo lanele ukukuhlawulisa kwaye uqalise usuku lwakho. Rhoqo ngonyaka nge-1 ka-Okthobha, kubhiyozelwa uSuku lweKofi lwaMazwe ngaMazwe ukwazisa amafama, i-roasters, i-baristas, kunye nabanini beevenkile zekofu, njl.
I-Indiya kuphela kwelizwe elikhulisa zonke iintlobo zekofu, ezinencasa engaqhelekanga kunye nevumba elimnandi. E-Indiya, oyena mvelisi wecofi inkulu yiKarnataka eyenze iipesenti ezingama-74 zemveliso yekofu iphela ngo-2017-2018. Yonke imihla i-3 yeekomityi zekofu zityiwa kwihlabathi liphela, inani eliqhubeka nokukhula.
Imbali yoSuku lweKofu yaMazwe ngaMazwe
I-International Coffee Organisation isungule uSuku lweKofu lwaMazwe ngaMazwe olusemthethweni eMilan ngomhla woku-1 ku-Okthobha ka-2015.
Ukubaluleka koSuku lweKofi lwaMazwe ngaMazwe
Olu suku ligqamisa ukubaluleka kwekofu yorhwebo olunobulungisa kwaye eyona njongo yayo iphambili kukwazisa uluntu ngeemeko abasebenza kuzo amafama ekofu. Olu suku lukwajolise ekomelezeni imeko yozinzo lwekofu.
Ngaphandle kwesidingo esikhulayo sekofu, abavelisi bafumana amaxabiso ngaphezulu kwe-30% engaphantsi komndilili kule minyaka ilishumi idlulileyo, oko ke kusongela impilo yabalimi bekofu kunye neentsapho zabo. Ke ngoko, eyona njongo iphambili ekubhiyozeleni uSuku lweKofu lwaMazwe ngaMazwe kukunceda amafama ukuba afumane umgangatho wokuphila ofanelekileyo.
Iindidi zekofu ziyakhonzwa kwihlabathi liphela
Cappuccino Olona hlobo lwekhofi ludumileyo emhlabeni, i-cappuccino inezinto ezintathu - i-espresso yokuqala, ubisi lwesibini olunomphunga, kwaye ekugqibeleni ungqaka lobisi olunamaqatha. Ukusetyenziswa, i-chocolate powder okanye i-shavings shavings iyasetyenziswa.
Ikofu yekofu -Yenziwe ngobisi olunomphunga kunye nefoto enye yekofu.
Ibonakalisiwe -Yenziwe ngokudubula amanzi abilayo phantsi koxinzelelo oluphezulu ngeembotyi zekofu ezicoliweyo.
Ikofu yaseMelika -Yenziwe ngokudibanisa amanzi ashushu kwimipu yekofu ye-espresso.
Umnyama omde -Yenziwe ngokudibanisa amanzi ashushu emugini kwaye emva koko wongeze i-espresso emibini emanzini.
Ikofu yaseIreland -Icocktail ebandakanya iwhiskey yaseIreland, ikofu eshushu, kunye neswekile. Umxube uxutywe kwaye ufakwe ukhilimu.
IVienna -Iimbumbulu ezimbini ze-espresso eyomeleleyo zongezwa ngaphambi kokuba ukhilimu otyhidiweyo wongezwe endaweni yobisi neswekile.
Flat emhlophe -Akukho ubisi olunefreyimu egalelweyo oluthululelwa ngaphezulu kwefresso.
UMocha -Iyafana nje ne-latte ene-chocolate eyongeziweyo okanye isiraphu kunye nokufakwa cream cream.
IMacchiato Kwindebe, kudityaniswa nefoto ye-espresso, ethi ikhutshwe ngobisi olunogwebu.
Ikofu yeHazelnut -Iimbotyi zekofu kunye ne-hazelnut yongezwa kwi-grinder emva koko yenziwa ngokushicilelwa eFrance.
Ikofu yaseTurkey - Olu hlobo lwekofu lulungiselelwe kusetyenziswa iimbotyi zekofu ezingacocwanga ezigqityiweyo.
Kajal agarwal kushushu kwi-sardar gabbar singh
izibonelelo zeoyile ye-castor yokunciphisa umzimba
singasela ubisi emva kokutya inkukhu
intyatyambo ewela kwicala lasekhohlo lothixo
umbona oswiti kunye neziphumo ebezingalindelekanga